Ka dhalinta gaaska noolaha wasakhda ku jirta qashinka baradhada | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Biogas
Waxaa jira siyaabo badan oo loo soo saaro tamar dib loo cusboonaysiin karo ama si fudud looga soo saaro tamar isticmaalka qashinka ama walxaha horayba loo isticmaalay. Tusaale ahaan, waxaan u wareejineynaa warshad tijaabo ah si loogu daaweeyo biyaha wasaqda ah iyo soosaarida gaaska noolaha ee lagu soo saaray mashruuca LIFE WOGAnMBR.
Waxay ku saabsan tahay karti u yeelashada iyo soo saarista gaaska noolaha qashinka kibble ee barafoobay iyo baradhada la shiilay. Runtii ma ku abuuri karnaa tamar anagoo ka faa'iideysaneyna qashinka noocan ah?
1 Soo saarista gaaska
2 Mashruuca dhirta Pilot
Soo saarista gaaska
Warshadda cuntada ee barafaysan Eurofrits iyo jiiska baradhada Matutano Waxay tijaabiyeen oo ay horumarinayaan farsamo adeegsanaysa xuubabka si ay u helaan una shaandheeyaan biyo tayo sare leh. Biyahaan waxaa loo heli karaa waraab iyadoo biogas-ka ku jira geedi socodka loo isticmaali karo tamarta dhirta wax soo saarka.
Hada, natiijooyin wanaagsan ayaa laga helay helitaanka gaaska noolaha ee dhirta Matutano. Labada warshadood ee cuntada waxay tijaabiyeen jiilka gaaska noolaha iyagoo adeegsanaya warshaddan tijaabada ah ee adeegsata tikniyoolajiyadda AnMBR. Eurofrits, oo ku taal Pozuelo de Alarcón (Madrid), waxay soo saartaa inta badan hilibka la qaboojiyey, digaagga, kalluunka, croquettes iyo baradhada iyo jajabyada Matutano ee Burgos.
Mashruuca dhirta Pilot
Mashruucu wuxuu ku leeyahay natiijooyin wanaagsan geedaha tijaabada ah ee la shaqeeya culeysyo kala duwan oo dabiici ah. Biomass sifiican ayuu uqabtay. Waxaa suurtagal noqotay in la gaaro 9.600 litir maalin kasta oo gaaska noolaha oo leh tayada methane oo ah 75%. Tani waxay muujineysaa jiritaanka farsamada, dhaqaalaha iyo deegaanka ee mashruucan noocan ah. Faa'iidada ay leedahay maahan oo keliya inay abuurto gaaska noolaha ee wax soo saarka tamarta, laakiin sidoo kale waxay sifeeysaa biyaha loo isticmaali karo waraabka. Ujeeddadu waa in la yareeyo wax soo saarka dhoobada sida ugu macquulsan isla markaana la iskula meel dhigo isku filnaasho xagga aragtida tamarta ah.
Intaas waxaa sii dheer, farsamadan ayaa la jaanqaadi karta geeddi-socod kasta oo ka jira warshadaha cuntada, iyadoo gacan ka geysaneysa yareynta cunnada alaabta ceyriinka ah iyo yareynta qashinka soo baxa. Nidaamkan xuubka, shaandhaynta aaladda biyaha wasakhda warshadaha ayaa lagu gaadhay taas ka dhig mid ku habboon waraabka tan iyo markii ay baaba'aan dhammaan noocyada kala duwan ee walxaha adag ee keena dhuumaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Biofuels » Biogas » Ka abuur gaaska noolaha wasaqda wasakhda ku jirta
Elon Musk: "Haddii aanan ku xallin karin dhibaatooyinka tamarta ee Australia 100 maalmood, waxaan ku sameyn doonaa lacag la'aan"